Graava: Ikhamera yeVidiyo ekrelekrele ehlela ngokuzenzekelayo | Martech Zone
Ngo-2012 uBruno Gregory wabethwa yimoto xa wayeqhuba ibhayisekile. Umqhubi ushiye ukubonwa kodwa uBruno ukwazile ukumfumana enetyala umqhubi kuba wayenekhamera erekhodishe umsitho. Kunyaka olandelayo, weza nombono wokusebenzisa iisenzi kunye nokufunda ngomatshini ukukhulisa ikhamera ezenzekelayo kuphela izehlo ezinomdla endaweni yokurekhoda iiyure zevidiyo engeyomfuneko, emva koko kuye kwanyanzeleka ukuba zihlele kunye amaxesha abalulekileyo.
Iziphumo zaba GraavaInkcazo ephezulu (1080p 30fps) yekhamera ebandakanya iGPS, iWi-Fi, iBluetooth, isantya, isivamvo se-gyro, ii-microphones ezi-2 ezikumgangatho ophezulu, isivamvo sokukhanya, isivamvo somfanekiso, isithethi kunye nokujonga ukubekeka kwentliziyo. Ikhamera inamanzi kwaye ine-slot encinci ye-SD kunye ne-Micro HDMI slot.
Nanku umbono wendlela iGrava emisela ngayo ividiyo ukuba igcinwe
Nantsi imizuzwana engama-30 elungileyo, dibanisa nomculo ngeapp.
Inkqubo yeGraava ikuvumela ukuba wabelane ngeevidiyo zakho, uzixhase, ulawule ikhamera ukude, kwaye ulawule useto lwekhamera.
tags: ikhamera +graavaIiVidiyo zeNtengisoisishicileli sevidiyo